Otu esi emepụta nbanye nwa oge na WordPress Site na njikọ Direct | Martech Zone
Otu esi emepụta nbanye nwa oge na WordPress Site na njikọ Direct
M na-arụ ọrụ gafee ọtụtụ narị ahịa na WordPress, na-emepe emepe gburugburu, plugins, integrations, wdg N'ihi na ọtụtụ akụkụ, a nwalere na-anwale isiokwu ma ọ bụ ngwa mgbakwunye na nwere oké fim na aha na-arụ ọrụ seamlessly na a ahịa saịtị. Mana, oge ọ bụla, ngwa mgbakwunye ma ọ bụ isiokwu ga-atụfu ahụhụ ma ọ bụ nwee ike wetu saịtị ahụ kpamkpam.
N'izu a, enwere m nsogbu na saịtị ụlọ ọrụ anyị ebe a na-emelite ya Ngwa mgbakwunye Elementor (nke m na-akwado nke ukwuu dị ka onye na-ewu ibe a na-ahụ anya) butere usoro iji melite ntọala na nchekwa data. Usoro malitere ma ọ dịghị emecha… ma ọ bụrụ na m pịrị ya iji aka mechaa ya, saịtị m ga-emehie.
Akpọtụrụ m ndị otu nkwado na Elementor ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe m nwere ike ime iji dozie nsogbu ahụ. Ha zara ngwa ngwa wee rịọ maka ịnweta saịtị ahụ nwa oge na ikike nchịkwa wee kwado ya Nbanye nwa oge na-enweghị ngwa mgbakwunye okwuntughe, ngwa mgbakwunye mepụtara site na Chekwaa ngwa otu.
Nbanye nwa oge na-enweghị okwuntughe WordPress ngwa mgbakwunye
N'ime nkeji ole na ole, etinyere m ngwa mgbakwunye ma rụọ ọrụ, ma nwee URL kpọmkwem ịbanye na tiketi nke nyere ha ohere ha chọrọ. Nke kachasị mma, ọ chọghị ndebanye aha n'akụkụ ha ma ọlị.
Nke a bụ ngwa mgbakwunye dị egwu n'ihi na ọ chọghị ka ị laghachi azụ ma hichapụ akaụntụ ahụ ị mepụtara, na-eme ka ị nwee ike ịnweta ụyọkọ akaụntụ ejighi ya nke nwere ike ịnwe okwuntughe dị mfe iji mbanye anataghị ikike.
Ngwa mgbakwunye bụ ihe niile ịchọrọ, na-enye atụmatụ ndị a:
Mepụta enweghị oke nwa oge logins
Jiri nke ọ bụla mepụta nbanye nwa oge ọrụ
Enweghị aha njirimara na paswọọdụ achọrọ. Jiri naanị a banye njikọ dị mfe
Nịm njedebe akaụntụ. Yabụ, onye ọrụ nwa oge enweghị ike ịbanye ma oge ngwụcha gachara
Nhọrọ njedebe dị iche iche dị ka otu ụbọchị, otu izu, otu ọnwa, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọzọkwa, tọọ ụbọchị omenala
Nyegharịa onye ọrụ na otu ibe mgbe nbanye
Tọọ a asụsụ maka onye ọrụ nwa oge
-ahụ ikpeazụ banye n'oge nke onye ọrụ nwa oge
Lee ugboro ole onye ọrụ nwa oge abanyela ntọlite ​​gị
Enwere m mmasị na ngwa mgbakwunye na etinyere m ya na ndepụta anyị Ihe kacha mma WordPress maka saịtị azụmahịa gị.
Nbanye nwa oge na-enweghị nkwụnye okwuntughe
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọta m maka Elementor ke ibuotikọ emi.
Tags: mepụta njikọ nbanyemepụta nwa oge nbanyenbanye nbanyeotúngafe nbanyestore ngwansogbu nke wordpressọrụ nbanyeWordPressnbanye nbanyenchekwa nchekwa
Gbakọọ ma ọ bụ jụọ nnukwu okirikiri dị n'etiti isi ihe nke Latitude na Longitude Iji The Haversine Formula (PHP, Python, MySQL, MSSQL Examples)
Okwu ahịrị isiokwu email na-akpalite nzacha spam na-eduga gị na nchekwa junk